Rakitra bokotra baoritra mazava misy loko miloko China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Tape mamatotra loko miloko,Tape mifamadika taratasy miloko,Tape Carton Sealing miloko
Home > Products > Taling Sealing > Tape miloko > Rakitra bokotra baoritra mazava misy loko miloko
Tsy ny resaka fantsom-bolo mazava loko miloko mazava no be mpitia indrindra, tsy vitan'ny mofomamy mena mena ihany, fa koa ny orinasa izahay dia manolotra anao 7 safidy mahavariana boaty adhesive feno loko. Ao anatin'izany ny fisafidianana manga, manga, maitso, mavo, mainty, mavo, ravina na kasety miloko mazava tsara. Hameno ny volanao daholo ny fanananao rehetra! Ny fanaovana anao hanana fiainana marevaka sy manokana.
Ny fanolorana serivisy OEM sy ODM dia afaka manamboatra kasety miloko namboarina, miaraka amin'ny sakan'ny fahasamihafana, ny hateviny samy hafa, ny halavam-bolo samy hafa, mety ho vita pirinty na teny ihany koa amin'ny fantsom-bidy miloko vita amin'ny loko.
Ny baoritra boaty vita amin'ny boaty dia vita amin'ny sarimihetsika BOPP (polypropylene oriented biaxial) izay noforonina tamin'ny adhesive akrika. Izy io dia mitondra am-bava vahaolana feno amin'ny fonosana fonosana ho an'ny saika fanangonam-bokatra sy fanamafisana.
● fanoherana avo
● Herin'ny tensile
● Tofehy tsara
● Miforitra amin'ny fahanterana sy ny mari-pana.
● Ny vidiny mora vidy, matevina ho an'ny fonosana amin'ny ankapobeny sy ny famehezana sarety.
Ny piraofy Bopp adhesive dia tontolo iainana, manana hery matevina, fahatelahana tsara, tombony adhesion tsara, afaka mahafeno ny fangatahanao mandritra ny fitaterana.
Ny fampitahàna amin'ny mpamatsy hafa dia tsy mitondra afa-po ireo vokatra Yalan:
P fomba fiasa:
T fitaovana fitsapana echnical:
Product Categories : Taling Sealing > Tape miloko
Tape mamatotra loko miloko Tape mifamadika taratasy miloko Tape Carton Sealing miloko Tape mifamatotra miloko Tape miloko miloko Tape loko miloko Tape mamatsy miloko Tape mifamatotra acrylic